Akara Watchtower Bụ Ihe E Ji Mara Bruklin Kemgbe
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Fante Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Korean Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Nahuatl (Central) Norwegian Polish Portuguese Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tarascan Totonac Tsonga Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Valencian Xhosa Zulu
Kemgbe ihe karịrị afọ iri anọ ugbu a, e nwere ihe pụrụ iche a rụrụ n’elu ụlọ isi ụlọ ọrụ anyị dị na Bruklin. Ogo ya dị ihe dị ka amaụkwụ iri na ise. Ihe ahụ na-acha ọbara ọbara. Ọ na-egosi ihe na-akụ kwa ụbọchị, nakwa otú ụbọchị na-ekporu ọkụ ma ọ bụ otú ọ na-ajụru n’oyi. Ọ na-egosi ihe ndị a mgbe ọ bụla. Ndị bi na Niu Yọk Siti ma ya nke ọma. Ọtụtụ n’ime ha na-eji ya ama ihe na-akụ na otú ihu ígwé dị.
Otu nwaanyị aha ya bụ Eboni na-esi n’ụlọ ya, nke dịkwa na Bruklin, ahụ ihe ahụ. O kwuru na obi na-adị ya ụtọ ma ya si na windo ya lepụ anya hụ ya, mata ihe na-akụ na otú ihu ígwé dị tupu ya agawa ọrụ. Ọ sị na ọ na-eme ka ya na-aga ọrụ n’oge, na-emekwa ka ya yiri uwe ya kwesịrị iyi maka oyi ma ọ bụ maka okpomọkụ.
Ihe a na-egosi oge na otú ụbọchị na-ekporu n’ọkụ ma ọ bụ otú ọ na-ajụru n’oyi ọ̀ ga-adịgịde ebe ahụ ruo afọ iri anọ ọzọ? O nwere ike ọ gaghị anọru ya. Ebe ọ bụ na Ndịàmà Jehova na-ebufe isi ụlọ ọrụ ha n’ebe ugwu Niu Yọk, ọ bụ ndị ga-azụrụ ụlọ ahụ ga-ekpebi ma hà ga-ahapụ ya ma ọ̀ bụkwanụ wepụ ya.
Ọ bụ ndị Ndịàmà Jehova zụtara ụlọ ahụ n’aka ha rụnyere ihe ahụ ihe karịrị afọ iri asaa gara aga. Ma, ọ bụ Ndịàmà Jehova rụzigharịrị nke dị ugbu a mgbe ha zụtara ụlọ ahụ n’afọ 1969.
A na-elezi ihe ahụ anya mgbe niile, ka o nwee ike ịna-arụ ọrụ nke ọma. Kemgbe e tinyere ya, ụmụ okorobịa ndị rụrụla ọrụ na ya akala nkụ. Ha na-agakwa arụzi ya n’oge ọ bụla a chọrọ ha.
Otu nwoke na-arụ ọrụ abalị n’isi ụlọ ọrụ anyị kwuru, sị: “N’otu mgbede, onyeisi otu ụlọ ọrụ mgbasa ozi na tiivi gwara anyị na oge akara anyị ahụ na-ekwu abụchaghị ihe oge na-ekwu. Ọ chọrọ ka anyị mezie ya n’ihi na ọ ga-ekwu okwu gbasara ya n’ihe omume tiivi ọ ga-eme n’abalị ahụ. Obere oge ọ gwara anyị ya, otu onye n’ime anyị na-ahụ maka ịrụzi ya agaa mezie ya.”
E nweela ọtụtụ ihe e mezirila n’ihe ahụ ka o nwee ike ịna-arụ ọrụ nke ọma ma na-ekwu ihe oge na-ekwu n’eziokwu. Na mbụ, ihe ahụ na-eji ihe ndị Bekee na-akpọ Fahrenheit egosi otú ụbọchị kporuru n’ọkụ ma ọ bụ otú ọ jụruru n’oyi. Ma, n’ihe dị ka afọ 1985, e mere ya ka o jirikwuo ihe ndị Bekee na-akpọ Celsius na-egosi ya.
N’afọ 2009, a gbanwere bọlb na-enwu n’ime akara ahụ, tinye ya bọlb ndị ka ya enwu. Bọlb ndị a na-anọte aka, o mekwara ka ego a na-emefu kwa afọ iji lekọta ihe ahụ belatatụ. Ugbu a, ọkụ ahụ na-acha ma akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọbara ọbara.